एउटा दुखद मन छुने प्रेमकथा, जसले रुवाउने छ तपाईलाई…. :2मिनेट समय निकालेर अवश्य पढ्नुहोला ! - hamro Desh
एउटा दुखद मन छुने प्रेमकथा, जसले रुवाउने छ तपाईलाई…. :2मिनेट समय निकालेर अवश्य पढ्नुहोला !
एउटा दुखद मनछुने प्रेमकथा: जसले रुहाउनेछ तपाईलाई, दुईमिनेट समय निकालेर अवश्य पढ्नुहोला । मनपरे अवस्य शेयर गर्नुहोला।
युवतिबाट यति कुरा सुनेर युवक नर्भस थ्यो, त्यही नि बडो साहस गरेर भन्यो- ‘सुन न .. म त त्यसै नर्भस थिएँ/भए .. तर म बास्तव मा यहाँ बसेको चै तिम्रो घर को Wifi मा पासवर्ड रैनछ, त्यही भएर फ्री को नेट चलाउन लाइ यहाँ बसेको पो त मनपरे अवश्य सेयर गरिदिनुहोला
अब अर्को दु:खद प्रेमकहानी